यस्तो छ जनताले नदेखेको पूर्वराजा वीरेन्द्रको घर ! - Enepalese.com
यस्तो छ जनताले नदेखेको पूर्वराजा वीरेन्द्रको घर !
इनेप्लिज २०७५ असार २७ गते १०:५२ मा प्रकाशित
विभिन्न देवीदेवताका आकृतिले कुँदिएको त्यहाँको गेटभित्र टाइल (झिँगटी) ले छाएको एउटा तीनतले घर छ। रङ लगाइएको छैन, धेरै झ्याल सादा छन्, ढोका कुँदेर बनाइएका छन्। घरको अघिल्तिर दुबो उम्रिएको खुला चउर छ। घरसम्म पुग्ने बाटोको पिच उक्किन थालेका छन्। वरिपरि जंगल बढ्दै छ, पन्छाउने कोही छैन।